घरमा श्रीकृष्णको मूर्ति छ भने अपनाउनुस् यस्ता सावधानि ! « गोर्खाली खबर डटकम
भगवान कृष्णले आफ्नो सबै रूपले भक्तहरुको मन मोहित गर्छन्। चाहे त्यो रणछोर हो या माखनचोर, ब्रजको गोपाले हो वा गोपीको वस्त्र हरण वाला बालक, उनको हरेक रूप मोहक छ। भगवान कृष्ण एक उत्कृष्ट नीतिनिर्माता थिए, साथै प्रेमका एक परिभाषा। भगवान श्रीकृष्ण कुनै पनि अन्य देवी-देवता भन्दा फरक र अद्वितीय हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि आफ्नो घरमा उहाँको मूर्ति राख्नु र पूजा गर्न पनि फरक विधि हुन्छ। हामीले भगवान श्रीकृष्णको मूर्ति घरमा स्थापित गरेका छौं भने हामीले उहाँको कृपा प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ त ?
भगवान कृष्णले सबैलाई आफ्नो बाँसुरीको धुनले मोहित पार्नुहुन्छ, उहाँको बाँसुरी अलौकिक छ। तर के तपाइँ थाहा छ कि घरमा बाँसुरी राख्दा भाग्यको साथ भरपूर मिल्छ। कृष्णको मूर्ति बाहेक, तपाईंले घरमा काठको बाँसुरी पनि राख्नु निकै शुभ हुन्छ।
भगवान श्रीकृष्णलाई गाई र बाछाहरू प्रति धेरै माया छ। उहाँलाई दुध, दहि र अन्य दुध उत्पादहरू निकै मन पर्छ। कृष्ण भक्तले आफ्नो घरको मन्दिरमा गाई र बाछोको एक जोडी तस्बिर भए पनि राख्नु पर्छ।
मयूर देख्नमा धेरै आकर्षक हुन्छ, साथै यसले भगवान कृष्णको चमत्कारी व्यक्तित्वको झलक पनि दिन्छ। भनिन्छ घर घरमा मयूरको प्वाँख राख्दा तपाईंको परिवारमा खुशी तथा सुख छाउँछ।
कमलको सुन्दर फूल हिलोमा बढ्छ, यसले जीवनको संघर्ष र विजयीको प्रतिक हो। यसले व्यक्तिको जीवनमा स्थिरता ल्याउँछ। यदि तपाईं आफ्नो जीवनमा स्थिरता खोज्दै हुनुहुन्छ भने, आफ्नो घरको मन्दिरमा कमलको फूल राख्नुहोस्।
भगवान कृष्णलाई दैनिक प्रसादमा माखन र मिस्री चढाउनुहोस्। यो भगवान कृष्णको अत्यन्त प्रिय चिज हो।
भगवान् कृष्णले घाँटी र नाडीमा वैजयन्ती माला लगाउनु हुन्थ्यो। यदि तपाईं भगवान कृष्णलाई प्रसन्न पार्न चाहानुहुन्छ र उहाँको कृपा प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, आफ्नो घरको मन्दिरमा वैजयन्ती माला राख्नुहोला।
यदि भगवान कृष्णका लावा राधा रानीको मूर्ति पनि घरमा राख्नु भएको छ भने यी कुरामा ध्यान दिनुहोला|
राधा रानीलाई हरेक दिन तुलसीको पातहरू अर्पण गर्नुहोस्, राधा रानी आफैले भगवान कृष्णलाई ती पातहरू अर्पण गर्नुहुनेछ।
यदि तपाईं श्रीकृष्ण र राधा रानीको मूर्ति घरमा स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ भने, याद गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो घरको प्रत्येक कुना सफा राख्नुहुन्छ। स्वच्छ तन, मन, वचन र कर्मले श्री कृष्ण तथा राधाको अनुसरण गर्नु पर्छ।
समुद्रमाथि संसारकै सानो देश ! यसरी बस्छन जनता…
१५ देखि २० दिनमै ५ देखि ८लाख सम्ममा भुकम्प रोहित यस्तो आकर्षक घर बनाईन्छ आजै सम्पर्क गर्नुहोस (कम्पनीको नम्बर सहित